Sei Zvapupu zvaJehovha Zvichiyeuka Rufu rwaJesu? | Kukurukura
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Mixe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Zvakanyorwa pasi apa ndizvo zvingaitwa nemumwe weZvapupu zvaJehovha paanenge achikurukura nemuvakidzani wake. Ngatimbotii Chapupu chinonzi Megan chaenda kumba kwemukadzi anonzi Shirley.
“RAMBAI MUCHIITA IZVI MUCHINDIYEUKA”
Megan: Hesi Shirley. Ndakafara kuti wakauya kumusangano wekuyeuka rufu rwaJesu Kristu vhiki rakapera. * Wakauona sei?
Shirley: Ndakanakidzwa, asi handina kunyatsonzwisisa zvimwe zvakataurwa. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vanokoshesa kuberekwa kwaJesu paKrisimasi kupfuura kukoshesa kwavanoita kuyeuka rufu rwake. Ungandiudzawo zvakare here kuti sei zvakakosha kuyeuka rufu rwaJesu.
Megan: Ndizvozvo kuti vakawanda vanopemberera Krisimasi. Asi Zvapupu zvaJehovha zvinotenda kuti zuva rekufa kwaJesu ndiro ratinofanira kukoshesa kupfuura mamwe ose. Kana uine kanguva ndinogona kukutsanangurira kuti sei zvichikosha uye kuti tinozviitirei.
Shirley: Tsanangura hako.
Megan: Chikuru chinoita kuti Zvapupu zvaJehovha zviyeuke rufu rwaJesu ndechekuti Jesu akati ndizvo zvinofanira kuitwa nevateveri vake. Funga zvakaitika usiku hwekupedzisira Jesu asati afa. Unoyeuka here paakadya nevateveri vake vakatendeka?
Shirley: Uri kureva Chirairo here?
Megan: Ndizvozvo. Chinonziwo Kudya kwaShe Kwemanheru. Ipapo Jesu akanyatsoudza vadzidzi vake zvavaifanira kuita. Ungaverenga here mashoko ake ari pano pana Ruka 22:19?
Shirley: Horaiti. “Akatorawo chingwa, akaonga, akachimedura, akavapa, achiti: ‘Ichi chinomirira muviri wangu uchapiwa nokuda kwenyu. Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.’”
Megan: Waita basa. Ona zvaakavaudza mumutsara wekupedzisira wevhesi iyi: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.” Asati audza vateveri vake kuti vamuyeuke, Jesu akavaudza zvakajeka kuti vaifanira kuyeukei nezvake. Akati aizofira vateveri vake. Jesu akataurawo pfungwa iyi pana Mateu 20:28. Vhesi yacho inoti Mwanakomana womunhu haana “kuuya kuzoshumirwa, asi kuzoshumira nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.” Muchidimbu, izvi ndizvo zvinoita kuti Zvapupu zvaJehovha zviite musangano gore negore pazuva rakafa Jesu kuti vayeuke kufa kwaakaita kuti atidzikinure. Kufa kwake kunoita kuti vanhu vose vanoteerera Mwari vaponeswe.
SEI JESU AIFANIRA KUTIFIRA?
Shirley: Ndakambonzwa vanhu vachiti Jesu akafa kuti tiwane upenyu. Asi chokwadi ndechekuti handina kumbobvira ndanyatsonzwisisa nyaya yacho.
Megan: Hausi wega Shirley. Nyaya yechibayiro chaJesu cherudzikinuro yakati omei. Asi ndechimwe chokwadi chinokosha chaizvo uye chinofadza chiri muShoko raMwari. Uchiri nenguva here?
Shirley: Ehe, ngatimbotaura.
Megan: Zvakanaka. Ndakaverenga nezverudzikinuro uye ndichaedza kutsanangura nyaya yacho zviri nyore.
Megan: Kuti tinzwisise kukosha kwerufu rwaJesu, tinofanira kutanga tanzwisisa zvakakonzerwa nekutadza kwakaita Adhamu naEvha mumunda weEdheni. Kuti tizive zvavakakonzera ngativerengei VaRoma 6:23. Ungaverenga vhesi yacho here?
Shirley: Horaiti. Inoti: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.”
Megan: Waita basa. Ngationgororei mashoko aya. Kutanga, ona kuti vhesi yacho inotanga ichiti: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu.” Kubvira pakasikwa vanhu, Mwari akagara ataura kuti chivi chinokonzera rufu. Ndizvo hazvo kuti pakasikwa vanhu hapana akanga ari mutadzi. Adhamu naEvha vakasikwa vasina chivi uye vana vose vavaizobereka vaisazovawo nechivi. Saka pakanga pasina aizofanira kufa. Adhamu naEvha nevana vavo vose vaigona kuzorarama nekusingaperi vachifara. Asi sezvatinoziva, izvozvo zvakazoitika here?
Shirley: Hazvina. Adhamu naEvha vakadya muchero wavakarambidzwa.
Megan: Ndizvozvo. Adhamu naEvha pavakasarudza kusateerera Mwari, vakaita chivi. Vakatosarudza vega kuti vave vatadzi. Zvavakasarudza izvozvo zvaizoita kuti ivo nevana vavo vose vaizoberekwa vapinde muna taisireva.
Shirley: Uri kurevei?
Megan: Rega ndimbokubvunza. Unofarira zvekubheka here?
Shirley: Ehe! Ndinozvifarira chaizvo.
Megan: Ngatitii watenga pani yekubikira chingwa. Usati watomboishandisa, inobva yadonha pasi, yofonyoka. Kana ukabikira chingwa mupani iyoyo chinobuda chakaita sei? Hachibudi chakafanana nepani yacho here?
Shirley: Ehe ndozvachinobuda chakaita.
Megan: Ndizvowo zvakaitika Adhamu naEvha pavakasarudza kusateerera Mwari. Vakabva vava nechivi, kungofanana nepani iye yafonyoka. Sezvo vakava vatadzi vasati vava nevana, vana vavo vose vaizoberekwa vaizenge vaine chivi kungofanana nechingwa chese chinobikirwa mupani yakafonyoka. MuBhaibheri shoko rokuti “chivi” haringorevi kutadza chete, asiwo chivi chatinoberekwa tiinacho. Ini newe takanga tisipo pakatadza Adhamu naEvha uye handisu takapara mhosva yacho. Kunyange zvakadaro, kutadza kwavakaita kwaizoita kuti vanhu vose vaizoberekwa vave nechivi, icho chaizoguma nerufu. Sezvatinoverenga pana VaRoma 6:23, mubayiro wechivi rufu.
Shirley: Ipapo panenge pasina kutongwa zvakanaka. Hazvingaiti kuti vanhu vese varambe vachitambura nemhaka yechivi chaAdhamu naEvha.
Megan: Ndizvozvo, tingaona sekuti hapana kutongwa zvakanaka. Asi pane zvimwe zvatingada kuziva. Mwari, uyo anotonga zvakanaka, akaita kuti Adhamu naEvha vafire mhosva yavo, asi isu vana vavo hatina kungosiyiwa tisina tariro. Mwari akaita kuti pave nenzira yekutinunura mudambudziko iri. Akaita kuti Jesu atifire. Tarisa zvakare pana VaRoma 6:23. Vhesi iyi yati “mubayiro wechivi ndirwo rufu,” asi yazotiwo: “Asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.” Saka rufu rwaJesu ndirwo rwunoita kuti tinunurwe pachivi nerufu. *
RUDZIKINURO NDIRWO CHIPO CHIKURU PANE ZVOSE CHATAKAPIWA NAMWARI
Megan: Pane imwe pfungwa yandiri kuda kukuratidza muvhesi iyi.
Shirley: Yekuti kudii?
Megan: Ona kuti vhesi yacho inoti: “Chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.” Kana Jesu ari iye akatambura ndokutifira, sei vhesi iyi yati, rudzikinuro “chipo chinopiwa naMwari”? Sei isingati “chipo chinopiwa naJesu”? *
Shirley: Aaa, handizivi.
Megan: Mwari ndiye akasika Adhamu naEvha, saka pavasina kuteerera mumunda weEdheni, ndiye wavakatadzira. Anofanira kunge akarwadziwa chaizvo vana vake vaviri vekutanga vepanyika pavakamupandukira. Asi Jehovha akabva ataura kuti aizogadzirisa sei nyaya yacho. * Akaita kuti mumwe wezvisikwa zvake zvekudenga auye panyika, orarama asina chivi, uye ozozvipira kufira vanhu kuti vadzikinurwe. Saka urongwa hwose uhwu hwekuti tidzikinurwe chipo chakabva kuna Mwari. Panewo chimwe chinoratidza kuti rudzikinuro chipo chakabva kuna Mwari. Wati wambofungidzira here kuti Mwari akanzwa sei pakaurayiwa Jesu?
Shirley: Aaa, handisati.
Megan: Ndaona kuti pano pane matoyi. Une vana here?
Shirley: Ehe ndine vaviri, mukomana nemusikana.
Megan: Semubereki, chimbofunga kuti Baba vaJesu vekudenga, Jehovha Mwari, vakanzwa sei zuva rakafa Jesu. Funga kuti vainzwa sei vari kudenga, vachiona Mwanakomana wavo wepamwoyo achisungwa, achishorwa uye achirohwa nezvibhakera? SaBaba, vainzwa sei pairovererwa Mwanakomana wavo pabango, ndokusiyiwa aripo achifa zvishoma nezvishoma, achiyaura nemarwadzo?
Shirley: Iii, anofanira kunge akarwadziwa chaizvo. Handina kumbobvira ndazvifunga!
Megan: Ndizvozvo, hatigoni kutsanangura kuti Mwari akanyatsonzwa sei zuva iroro. Asi tinoziva kuti anorwadziwawo, uye tinoziva chakaita kuti arege zvose izvozvo zvichiitika. Rugwaro rwunozivikanwa nevakawanda rwaJohani 3:16, rwunotsanangura nemazvo chakaita kuti adaro. Ungapaverenga here?
Shirley: Ehe. Panoti: “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”
Hapana rudo rwungapfuura rwatakaratidzwa naMwari paakatipa chibayiro cherudzikinuro
Megan: Waita basa. Ona zvakare panotangira vhesi yacho. Panoti: “Mwari akada nyika.” Saka rudo ndicho chinhu chikuru chakaita kuti adaro. Rudo rwakaita kuti Mwari atume Mwanakomana wake panyika kuti atifire. Chokwadi, hapana rudo rwungapfuura rwatakaratidzwa naMwari paakatipa chibayiro cherudzikinuro. Saka Zvapupu zvaJehovha zvinoita musangano gore negore pazuva rakafa Jesu, zvichiyeuka rudo irworwo rwatakaratidzwa. Zvatakurukura zvakubatsira here?
Shirley: Chokwadi zvandibatsira. Waita basa nokukurukura nyaya iyi neni.
Pane nyaya yomuBhaibheri inombokutemesa musoro here? Pane zvaunoda kuziva here nezvezvinotendwa kana kuti zvinoitwa neZvapupu zvaJehovha pakunamata? Kana zviripo, usazeza kubvunza mumwe weZvapupu zvaJehovha. Achafara kutaura newe nyaya dzakadaro.
^ ndima 5 Kamwe chete pagore, Zvapupu zvaJehovha zvinoungana pazuva rakafa Jesu kuti vayeuke kutifira kwaakaita. Gore rino, rufu rwaJesu rwuchayeukwa musi weFriday 3, April.
^ ndima 32 Imwe nyaya ichabuda mumagazini ino ichatsanangura kuti rufu rwaJesu rwunotinunura sei pachivi, uye zvatinofanira kuita kuti tibatsirwe nechibayiro chaJesu chekutidzikinura.
^ ndima 36 Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jesu haasiriye Mwari. Kuti udzidze zvakawanda, ona chitsauko 4 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 38 Ona Genesisi 3:15.